Dowlada Faransiiska oo u yeeratay Safiirka ka jooga Turkiga -
Convicted of corruption, Sarkozy continues media offensive
Germany monitors the far-right AfD party
Sao Paulo freezes as Brazil’s daily deaths in Covid-19 reach a…
US House cancels Thursday’s session after warnings about potential land on…
Germany extends locking of Covid-19, with restrictions that are gradually lifted
Home News Dowlada Faransiiska oo u yeeratay Safiirka ka jooga Turkiga
Dowlada Faransiiska oo u yeeratay Safiirka ka jooga Turkiga
Faransiiska ayaa wadatashi ugu yeeray safiirkiisa u fadhiya Turkiga, kadib markii uu Madaxweyne Rajab Tayib Erdogan hadallo xanaf leh ku weerarray dhiggiisa Emmanuel Macron.
Erdogan oo la hadlayay xubno ka tirsan xisbigiisa AK party ayaa sheegay in Macron uu u baahan yahay baaritaan dhanka maskaxda ah, kadib markii uu hogaamiyaha Faransiiska sheegay inuu gacan bir ah ku qabanayo Islaamiyiinta xagjirka ah ee wadankiisa.
Madaxweyne Macron oo ka falcelinayay dilka nin macallin taariikhda ahaa oo qoorta laga jaray kadib markii uu soo bandhigay sawir uu ku tilmaamay Nebi Maxamed NNKH, ayaa wacad ku maray in dalkiisa uusan joojin doonin sawirrada noocaasi ah.
Mas’uul u hadlay Faransiiska ayaa sheegay in Erdogan uu “u dhaqmay si aan la aqbali karin oo xushmad darra ah.”
Labada hogaamiye ee dalalkoodu ay ka wada tirsan yihiin gaashaanbuurta NATO ayaa mudooyinkii dambe isku hayay arimo ay ka mid yihiin colaadaha Suuriya, Liibiya iyo Nagorno- Karabakh. Balse hadalka Erdogan ayaa ahaa mid si toos ah uu ugu weerarray shakhsiyadda Macron.
Madaxweyne Erdogan ayaa ka carooday in qaar kamid ah dhismayaasha dowladaha hoose ee Faransiiska lagu soo bandhigay sawir gacmeedkii macallinka loo dilay, xilli xus loo samaynayay Arbacadii.
Waxa uu sidoo kale dhaliilay hadal uu Macron jeediyay ka hor dilkaasi oo ahaa in “Diinta Islaamka ay dhibaato xooggan wajahayso caalamka oo dhan.”
Muslimiinta Faransa ayaa ah kuwa ugu badan Yurub, isla markaana gaaraya 10% tirada shacabka dalkaas. Qaar kamid ah Muslimiintaas ayaa ku eedeeyay Macron inuu geeska gelinayo diintooda, hadalladiisana ay qiil siin karaan kuwa Islaamka neceb.
Xiisadda labada waddan ayaa meel adag gaartay, waxaana Turkiga uu taageeray in la qaadaco alaabaha Faransiiska lagu sameeyo, arintaasi oo ka billaabatay qeybo kamid ah Bariga Dhexe.
Previous articleFaahfaahin ka soo baxaysa dooman hub sida oo lagu qabtay Xeebaha Puntland
Next articleChildren slaughtered in attacks at school in Cameroon
Bankiga Dhexe ee Soomaaliya oo amar ku bixiyay in bangiyada ay qaataan 50ka Dollar